Wararka Maanta: Jimco, Jan 25, 2013-Xisbiyada Mucaaradka Jabuuti oo isku diyaarinaya ka Qayb-galka Doorashada Baarlamaanka ee Sannadkan
Nidaamka cusub ayaa fursad siinaya mucaaradka dalkaas kaddib 35-sano, iyadoo xukuumadda Jabuuti aqbashay Novembertii lasoo dhaafay in liiska aqlabiyadda lagu baddalo nidaam liisas isku dhafan ah oo gaaraya 20% kuraasta lagu qaybin doono qaab saami ah.
"Isbahaysiga kooxaha mucaaradka ee dalka Jabuuti ee USC oo ay ku biireen dhaqdhaqaaqyo iyo shakhsiyaad madax-bannaan ayaa dhisay isbahaysi soo gunaanadaya qaadacaaddii siyaasadda ee tobanka sano socotay," ayaa lagu yiri warbixni uu bishii lasoo dhaafay ay soo saareen mucaaradka.
Gaashaanbuurta mucaaradka ayaa xisbiyada ku midoobay waxay kala yihiin: isbahaysiga jamhuuriga ah ee horumarka, xisbiga horumarka Jabuuti iyo xisbiga dimuqraadiga Qaranka.
C/kariin Maxamuud oo ka mid ah aasaasayaasha xisbiga horumarka ee dalka Jabuuti ayaa rajo weyn ka muujiyay in mucaaradku ay sannadkan sidii hore ka guul badnaan doonaan.
"Mucaaradku waxay rajo weyn ka qabaa in sannadkan ay guulo waaweyn ka gaaraan doorashooyinka baarlamaanka oo dhacay bisha 22-ka Febraayo 2013," ayuu yiri C/karin Maxamuud oo intaas ku daray in mucaaradkku ay haystaan fursad xooggan oo ay doorashooyin guulo uga gaari karaan.
Hoggaamiyaha caanka ah ee mucaaradka, Daahir Axmed Faarax oo Jabuuti ku laabtay 13-kii bishan kaddib 10 sano oo Belgium uu musaafuris ahaan ugu noolaa isagoo ku biiray isbbahaysiga USC oo hadda uu ka yahay afdhayeen.
Sidoo kale, Xasan Cabdullaahi oo ka mid ah xubnaha Xisbiga dimuqraadiga Qaranka ayaa sheegay in isbahaysiga talada haya ee UMP uusan walaac ka qabin mucaaradka Jabuuti. Isagoo yiri: "Mucaaradka waxaa haysta hoggaan la'aan, isbahaysigani waa mid la iska dhisay oo aan xaqiiqo ku fadhin. Taas waxaa caddeyn u ah inay 10 sano ka maqnaayeen masraxa siyaasadda aysanna haysan sumcad siyaasadeed."
Mas’uulkan wuxuu yiri: "Xisbiga talada haya ee UMP hadda wuu ka xoog badan yahay sidii hore, mucaaradkuna ma haystaan fursad macquul ah oo ay kaga guuleysan karaan xisbigeenna,” ayuuu yiri Xasan Cabdullaahi.
Isbahaysiga xilka haya ee UMP oo xilka haya 10-sano ayaa waxaa ka mid ah: Dhaqdhaqaaqa Ummadda ee Horumarka, Dhaqdhaqaaqa Dib-u-habaynta Midnimada iyo Dimuqraadiyadda, Midowga Taageerada Dib-u-habaynta iyo xisbiga Dimuqraadiga Bulshada.
Dhanka kale, waxaa jira laba xisbi oo aan haysan ogolaasho ay uga qaybgeli karaan doorashooyinka baarlamaanka ee sannadkan, kuwaasoo kala ah RADD oo ay xubnihiisu ka socaan bulshada rayidka ah iyo xisbiga MODEL oo loo arko inuu yahay xisbi Islaami ah oo ay xubno ka yihiin culummada diinta ugu waaweyn dalka Jabuuti.